ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၅. ၁၂. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဆီဆုံရပ်ကွက်ရှိ ရှေးဟောင်းမောက်စံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံပစ္စည်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု၍ ရှေးမူမပျက်ပြုပြင် မွမ်းမံပေးနိုင်မည်‌့ အစီအစဉ်များ သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-ရန်ကုန်မြို့၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘုရင်‌့ဆွေတော် မျိုးတော်များ၏ အုတ်ဂူသင်္ချိုင်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်းစောင်‌့ရှောက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ပညာရေးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မူလတန်းကျောင်းများရှိ ဘွဲ့ရအထွေထွေလုပ်သား များသည် မူလတန်းပြအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးရန် သို့မဟုတ် ပညာရေးကောလိပ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး မူလတန်းပြဆရာအဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသည့် ပြည်တွင်းကျောင်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံဆက်နွှယ်ကျောင်းများ စစ်မှန်မှုနှင့် ခွင့်ပြုသက်တမ်း ရှိ/မရှိကိုမည်သည့်ဌာနက စိစစ်ခွင့်ပြုပေးသည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(င)-ချောက်မြို့ရှိ အမှတ်(၃) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၏ တစ်ထပ်ဆောင်မှာ အန္တရာယ်ဆောင် ဖြစ်နေပါသဖြင့် ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၄၀ ပေ x ၃၀ ပေ) RC နှစ်ထပ်ဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ခေတ်မီအဆင့်မီ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်များတွင် ကျွမ်းကျင်အရည်အချင်းရှိ စာကြည့်တိုက်မှူးများ ခန့်ထားပေးရန်နှင့် ဆရာ/မများ၊ ကျောင်းသား/သူများအတွက် ယခုထက် အကျိုးရှိအောင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဆ)-သက်တမ်း ၅၆ နှစ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော အ.မ.က (ကြူတော) ကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား မွမ်းမံပြင်ဆင် ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်